Samsung Galaxy Touch, oo ah bedelka Android ee iPod Touch | Androidsis
Samsung Galaxy Touch, oo ah beddelka Android ee iPod Touch
Samsung ayaa soo jeedisay in noocyadeeda kala duwan Gawaarida Galaxy noqo mid aad u ballaadhan oo aan ku qanacsanayn daadadka suuqa ku haya taleefannadooda iyagoo hadda qorshaynaya inay soo saaraan qalab multimedia leh muuqaal dibadeed oo la mid ah taleefannada. Waxay ku saabsan tahay waxa loogu yeero Samsung Galaxy Touch ama magac magac ah YP-MB2.
Qalabkan ayaa la imaan doona Android 2.1 iyo nidaamkaan hawlgalka Interface TouchWiz 3.0 laakiin xoogaa la waafajiyay isticmaalka multimedia-ka ee terminaalka, iyadoo la waayey wax kasta oo la xiriira isticmaalka taleefanka. Layaab ma noqon doonto marka cusboonaysii Galaxy S ilaa Android 2.2 terminaalkan ayaa sidoo kale helay cusboonaysiinta la sheegay.
Waxay noqon doontaa terminal leh astaamo gudaha ah oo aad ula siman walaalahooda Galaxy S mid ka bilaabaya 4-inji Super Amoled bandhigay, processor Hummingbird xawaare 1 ghz ah, 6-dhidibka dareeraha dhaqdhaqaaqa, iskuxirka Wi-Fi, Bluetooth, raadiyaha FM iyo GPS. Waxaa loo iibin doonaa noocyo kala duwan iyadoo kuxiran awooda gudaha ee keydinta, sida 8, 16 ama 32 Gb.
Qalab awood leh inuu ka ciyaaro DivX, OGG, Xvid, MP3, FLAC, faylasha MPEG4, iwm dhibaato la'aan.
Marka loo eego wax walba, waxaan ku arki doonnaa suuqa Aasiya laga bilaabo Ogosto 11 ee soo socota, waxaana rajeyneynaa goor dambe suuqyo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy Touch, oo ah beddelka Android ee iPod Touch
Beddelka weyn ee iPod Touch! wuxuuna ka horeeyaa barnaamijka Microsoft ee ZuneHD 😀
Ku jawaab Oriol
Motorola waxay sii deyneysaa Droid X Source Code